Waxaa sawiray Latkin LLC
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Ruushka ayaa ka codsatay Wasaaradda Beeraha inay dib ugu laabato kabaaladii beeraleyda Ruushka ee iibsashada shidaalka iyo saliidaha, ayay tiri TASS.
Wasiirka Beeraha Dmitry Patrushev wuxuu ka helay CCI warqad ay ku weydiisaneyso in dib loogu soo celiyo magdhowga shidaalka iyo saliidaha si loo yareeyo sicirka kororka shidaalka naaftada, tani waa run gaar ahaan inta lagu guda jiro ololaha beero iyo goynta.
Warqad, madaxa CCI Sergey Katyrin wuxuu ku sheegay in dhulal badan iyo gobollo ay ka jiraan sicirka shidaalka iyo saliidaha. Tusaale ahaan, gobolka Sverdlovsk bishii Maajo oo keliya, qiimooyinka lagu iibsado shidaalka naaftada ee suuqyada jumladaha ayaa kordhay celcelis ahaan 6 boqolkiiba, iyo gaaska oo kor u kacay in ka badan 15 boqolkiiba. Sicirka boodhka wuxuu ka dhacay dhererka xilliga abuuridda.
CCI waxay ka walaacsan tahay waxa ay warqaddu leedahay “tani waxay saameyn xun ku leedahay waxqabadka maaliyadeed ee shirkadaha beeraha, soosaarayaasha iyo soosaarayaasha wax soo saarka beeraha”. Hadda goosashada ayaa bilaabatay oo cawska la goosanayo, Wasaaradda Beeraha waa in ay qaadaa talaabooyin deg deg ah.
Tags: Wasaaradda Beeraha ee Xiriirka Ruushkakabista shidaalka iyo saliidahaRugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Ruushka